मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका यी सातले अझै छाडेनन् मन्त्री क्वाटर,आखिर किन ? – hamrosandesh.com
मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका यी सातले अझै छाडेनन् मन्त्री क्वाटर,आखिर किन ?
जेठ ६ गते नै मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसिएका ७ मन्त्रीले अझै मन्त्रिनिवास छोडेनन् । मन्त्रीबाट पदमुक्त भएको आज ११ दिन भैसक्दापनि उनीहरुले क्वार्टर नछोडेको पाईएको छ । उनीहरु पूनः नियुक्तीको आशामा रहेको बुझिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अझैसम्मपनि उनीहरुलाई पूनः नियुक्ती गर्ने तयारी नगरेको उच्च स्रोतको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको आज दुई साता बित्न लाग्दापनि मन्त्रिक्वार्टर नछोड्नु लाजमर्दो भएको भन्दै अहिले सार्वजनिक रुपमै आलोचना भैरहेको छ ।
पदमुक्त हुनेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी,उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट,शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह,श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा लामा थिए । उनीहरु सातै जना पूर्व माओवादी केन्द्रबाट सुरुमा मन्त्री बनेका थिए । तर, तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादमा उनीहरु प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका थिए ।
तर,आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि सबैभन्दा निर्णायक भूमिका खेलेको र गुण लगाएका जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउने ओलीको तयारी छ । यो बीचमा ठाकुर र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर सम्वाद जारी राखेका छन् । जसपाबाट सरकारमा सहभागी हुँदा कम्तिमा पनि ८ जना सहभागी हुने जनाईएको छ । यसो हुँदा अहिले मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त भएका यी सातै जना मन्त्री हुने सम्भावना पनि छैन् । लामो समय राजनीति गरेका र पटक पटक मन्त्री भएकाहरुले यो कुरा नबुझ्ने कुरै छैन् । तर, उनीहरु अहिले पनि मन्त्री बन्ने आशमा क्वार्टर नछाडी बसेका छन् ।